Ngathi | Inkampani Xiamen Picvalue Corp.
Inkampani Xiamen Picvalue Corp.esekwe ngo-2005 yenye yezinto eziphambili, abavelisi abaqeqeshiweyo kunye nabathengisi bengxowa yepikniki, ingubo yepikniki / ukhuko, ibhegi yasemini, ibhegi ye-neoprene, ibhegi epholileyo, ibhegi yolonwabo, ibhegi yokuhambisa ukutya kunye nengxowa yezithambiso njl. Umzi mveliso wethu ubeka eXiamen China, malunga nemizuzu engama-40 ukusuka eXiamen International Airport ngemoto.
Sineengcali ezingama-300 kunye nabasebenzi ukuvelisa ibhegi nengubo yee-odolo zabathengi bangaphandle. Ngokufanelekileyo sinezinto ezingama-200 zokukhetha abathengi rhoqo ngonyaka. Sinikezela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.
Iimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa eYurophu, eUnited States, e-Australia kunye ne-South-mpuma Aisa. Sibonisa iisampulu zethu eCanton Fair, eHong Kong Fair kabini ngonyaka. Umbuzo wakho kwiimveliso zethu kwaye undwendwele kwindawo yethu yokuma ngexesha leFair uya kwamkelwa ngokufudumeleyo.
Siyabulelwa ngenkxaso yabo bonke abathengi kwaye silapha sisebenza nzima ukunika bonke abathengi iinkonzo ezilungileyo.
Sigcina inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo kunye neenjineli ezinoxanduva lokuqinisekisa ulwaneliseko lwabathengi bebonke. Ngokunjalo, iimveliso zethu zisizuzele igama elihle kumgangatho ophezulu, ubugcisa obuhle kunye nokuqina. Siyakwazi ukuthumela ngaphandle zonke iimveliso zethu kunye nentengiso yethu yonyaka ifikelela kwizigidi ezisixhenxe zeedola.
Abathengi bethu abaphambili eMntla Melika: TJ-maxx, iBath Bath & Beyond, Belk, Ivenkile yeKrisimesi, ngoLwesibini kusasa, eKroger, eRoss naseKOHL'S.
Abaxhasi bemeyile eYurophu: iStockmanni France, TK-Maxx eUK, Joinco / Pingo doce Portugul, Sok Finland, Rofu Kinderland eJamani, Tammer Finland, VOG ingenisa iAustria, Spokey Poland.
Umthengi ophambili wezinto zebhegi ezipholileyo kuMbindi Mpuma: I-Bin Dawood igcina i-Saudi Arabia.
Oyena mthengi uphambili wentengiso yokuhanjiswa kwento eYurophu: Wolt Finland
Umzi-mveliso wethu uphumelele i-BSCI, iSedex AUDIT, uphicotho lweWalmart. Iimpahla zethu ziye zadlula kwimigangatho ye-EN71, Reach, CA65 kunye ne-FDA.
I-Cooler Bag Kunye neGumbi lePiknic lokubonisa igumbi
Indawo epholileyo yeengxowa
Umatshini wokuPakisha iiNgxowa ezipholileyo
I-Cooler Bag Stiching